Popular Jewelry | Ntọala NYC Jeweler | Nhọrọ kacha mma
Celebrity Ogo & Ọrụ
Elu igwe oyuyo
Otú o si bido
Kwesịrị. Okomoko. Niile ọchị.
Ezi ọla Ndị Ahịa
Akụrụngwa akụrụngwa. Ọrụ aka dị iche. Ọ bụ gị kedu kedu.
Iji Agụụ Na-eme Ihe Kemgbe 1988
Popular Jewelry- na obi ogbe ndịda NYC, ebe agbata obi pụrụ iche nke Chinatown, Little Italy, SoHo na Tribeca na-asọrịta. Ruo ọtụtụ iri afọ, Popular Jewelry aghaghi ime ihe ndi ahia ya choro, nke ndi obodo na ndi mba ozo toro.
America ndị mara mma
American Eagle Lady Liberty Coin 1 oz (Random Year) Ezi Gold 22K
Agba Flag Amara America
site $ 199.00
Nwanyị Liberty Ridged Ring (14K & 22K)
American Eagle Lady Liberty Coin 1/2 oz BU (Random Year) Ọma Gold 22K
Ogosi Flag America (14K)
Nwanyị Liberty Medallion Pendant (14K)
Oge Ochie Nwanyị Egwuregwu Nke Nwanyi (Silver)
Pritant American Flag Pendant (14K)
Nweta nnwere onwe nwanyị Lady (24 & 14K)
Diamond Lady Liberty Ring (10K).
Nwanyi nnwere onwe Medallion CZ Pendant (14K)
Nchịkọta Ndị Egosipụtara
Zirconia Milgrain Akwụkwọ Ozi Mbụ (14K)
Ghachara Emecha Biplane Amara
site $ 250.00
Oti mkpu na Elekere Amara
site $ 185.00
Royal Iwepụ Kaadị Amara
Petite Artist Palette Amara
site $ 175.00
Pretzel 3D Amara
site $ 125.00
Ududo Web Oval Gemstone Amara
site $ 225.00
Zirconia Princess-Cut Pendant (ọlaọcha)
Zirconia Baguette Blossom ụyọkọ Pendant (Silver)
Nwa nwanyi nke Chinatown
Showlọ ihe ngosi ala anyị
255gbọala 10013, New York, NY XNUMX
7 Ulo n’izu, n’elekere itolu nke isi nke isii - 9:30 PM
Ka anyị Nweta Social
Blog a na-egosi
Nabata na Nri Ozi Anyị!
N’ebe a, ị ga - achọta akụkọ niile na - eme eme Popular Jewelry. Biko lelee azụ mgbe mgbe iji nụ maka mbido ngwaahịa ọhụụ na-atọ ụtọ ma ọ bụ ihe omume pụrụ iche…
site na 260 nyocha
Mgbaaka Ezinụlọ, Hụrụ ya n'anya!
azutara m ya nye Nwanne m nwanyi maka Popcorn Mgbaaka, o wee daba! Mgbaaka ya dị 4.2mm!
Ezinaụlọ puffy obi amara amara (ọlaọcha)
14k nkpuru okwu abuo Jesus
Edere mpempe akwụkwọ mbụ. Ha nyere jesus mpempe nke di oke onu ahia.
Ọ bụ ebe a ụbọchị na-esote mgbe ụgbọ mmiri pụọ. Ihe niile sitere na ozi wee gaa nnukwu ekele nye onye na-ere ahịa. Jizọs mpempe dị arọ ma sie ike. Enwere m mmasị na ya karịa mpempe akwụkwọ azụ. Gbara Aka. W Wont ga-emechu ihu. Akwa onye ahia.
Javier Morales ebe obibi oyiyi
Ihe ederede Halo Jesus Head Pendant (14K)
HOVR CH CHBANYA M
Popular Jewelry mere ka ọ dịrị m mfe ịtụ m olu online. Nkwurịta okwu ahụ dị egwu. Agwara m ha ihe m na-achọ ma ha mezuo mkpa m. My 14K Gold Chain zuru oke. Ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Enwetara m agbụ m n'otu izu ahụ m nyere ya iwu. Ezigbo Ọrụ Ndị Ahịa. Daalụ
M tolitere na Brooklyn, NY ma zụta ọla m niile na Canal St na Manhattan, NYC. Ugbu a m bi na Florida na agaghị m azụta ọla edo 14k na Florida. Ọ bụrụ na m chọrọ ọlaedo, M ga-azụ ya naanị na Popular Jewelry. Daalụ ụmụ okorobịa maka ihe niile.
Ugboro abụọ nwere ụda abụọ / Italian-Cuban Link Chain (14K)
Nnukwu ọrụ !!
Bezel Ọjọọ Anya Anya (14K)
Kevin nyeere m aka ijide n'aka na ihe m na-ekwu bụ nkọwa m. M wee nweta ya na mail n’echi ya! PJ bụ naanị ebe m ga-enweta ọla m, yana ezi ihe kpatara ya.
Agbapụtala Star Star nke David Hamsa Hand Pendant ọlaọcha
Apụghị Pendant / Chain na Ọrụ Amatụnanya 5/5 Kpakpando
Kevin na William nyeere m aka ma kwado m ajụjụ m niile banyere ihe m na-eche (ogologo dị iche iche, agbụ, akwa, nha, wdg)
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta ọla, nke a bụ ebe ị ga-eme ya. Ga-aza ajụjụ gị niile na iberibe mara mma. M ga-abịa azụ ịzụta ọzọ ọla. (Atụla egwu ịjụ ajụjụ maka agbụ ma ọ bụ agbụ ndị a na-ere!)
E nwere ihe mere ọkacha mmasị gị omenka ụlọ ahịa na Popular Jewelry! Ana m ekele gị ọzọ Kevin na William maka ịme ka azụmahịa m dị mma ma zaa ajụjụ m niile!
Solid Cuban Italian nke mepere emepe (14K)
Zuru okè. Ga-azụta gị ọzọ.
Diamond-Cut Hockey Osisi & Puck Pendant (14K)
Enweghi ike ịrịọ maka mma
Kevin na onye ọ bụla nọ na Popular Jewelry lekọtara m anya ma hụ na m natara iwu m ASAP. Ọ bịara ngwa ngwa ma enwere m ekele maka mpempe m. Daalụ 🤲🏽
Osisi Pyramid Egypt Cut Pendant (14K)
Miami Cuban mgbaaka (14K)
Zuru okè 🥰
Pendant ọla ọcha na-agbapụta
Ọbụna Ka Mma na Onye
Akwa mma mpempe na ọ dị mma karịa foto. Ndị otu ahụ nyere aka na usoro ahụ dum. Ga-enwetakwu ihe karịa PJ n'ọdịnihu.
Art Deco Garnet Cross Mgbaaka (14K)
Nnukwu ọmarịcha ịkụ ọkpọ dị ka nke mbụ ọlaedo Glove pendant
Glogba mbọ dị na Pọta
Ngwongwo kacha mma gburugburu
Zitere m mpempe akwụkwọ na igbe onyinye na ọla edo 14k niile..
Na-ele anya karịa ka mma na mmadụ
Ogwe osisi Guadalupe Square (14K)
A hụrụ m ya n'anya m na-eyi ya kwa ụbọchị🙏🏾
[Lobster mkpọchi] Solid Miami Cuban Chain (14K)